အိမ်ထောင်ရေး – MrDBA Blog
Posted in ပေါကျကရအတှေး, လကျ​တညျ့​စမျး​ခွငျး - March 28, 2009 - 29 Comments
Some material may be inappropriate for children under 13. May contain moderate language, minimal strong language, some explicit nudity, intense violence and/or gore, or mild drug content.
အမှာစာ။ ။ အကယ်၍သင်သည် မိဘအုပ်ထိမ်းသူလက်အောက်မှ မလွတ်သေးသူဖြစ်က မိဘခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ ဖတ်ရန်။ အကယ်၍သင်သည် ဆက်လက်ဖတ်မည်ဆိုပါက ယင်တလောင်းလောင်းဖြစ်နေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ယပ်တောင်တစ်ချောင်းဆောင်ထားရန်။ အရှက်အကြောက်ကြီးသူဖြစ်က ဆက်မဖတ်ပါရန်။
ကိုရင်မောင်တစ်ယောက် ရုံးဆင်းတာနဲ့ မမေ့မလျှော့ လုပ်စရာရှိတာတစ်ခုကို သတိတရလုပ်ရမည်။ အိမ်ကမိန်းမက မနက်ကထဲက သတိတရမှာလိုက်သည်။ နှိုးစက်ပါသော နာရီတစ်လုံး ဝယ်ခဲ့ပါမည့်အကြောင်း။ သူ့မိန်းမက ရိုးသည်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့် နှိုးစက်ပေးထားလဲရကြောင်း ပြောသည်ကို လက်မခံ၊ နှိုးစက်ဆိုတာ နာရီတစ်လုံး သတ်သတ်ရှိရမည်ဆို၍ ဈေးပေါပေါတစ်လုံး မဖြစ်မနေဝယ်လာရန်မှာလိုက်လေသည်။ ဈေးတန်းထဲက ပေါချောင်ကောင်းတစ်ဆိုင်မှာ ၅ကျပ်တန်နာရီတစ်လုံး ဝယ်အပြီးမှာတော့ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ နာရီဝယ်ပြီးကြောင်း ဒီနေ့ည အိမ်အပြန်နောက်ကြမည့် အကြောင်း၊ ထမင်းစားမစောင့်ဖို့ အကြောင်း စသဖြင့်တွေပေါ့။ ဒီနေ့ည ရုံးအဆင်းတွင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်သို့ သွားရန်ရှိသည်ကိုတော့ သူ့မိန်းမသိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း မိန်းမကိုတော့ ဂရုစိုက်ကြောင်းပြသည့်အနေဖြင့် သတင်းပို့ရပေသေးသည်ပေါ့။
မနေ့က တင်မောင်ဖုံးဆက်လာသည်။ ရန်ကုန်တွင် အစိုးရအလုပ်ဝင်လုပ်နေသော ခင်မောင်တစ်ယောက် စင်ကာပူသို့ အစည်းအဝေးလာတက်ရမည်။ မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်သော ငယ်ပေါင်းများ ကျောင်းပြီးကထဲက ကွဲကွာနေကြတာ ဖြစ်သောကြောင့် ယနေ့ည သူ့အိမ်တွင် လူစုံတက်စုံဆုံကြမည် လာခဲ့ပါဟု ဆိုထားသည်။ တင်မောင် ခင်မောင် ရင်မောင် ဆိုသည်မှာ ကျောင်းတုန်းကထဲက နာမည်အတွဲလိုက်ဖြစ်သောကြောင့် လူစိတ်ဝင်စားသော အတွဲတွေဖြစ်ကာ လူတွေကလဲ ခပ်ပျော်ပျော်တွေထဲကဖြစ်သည်။ ကိုရင်မောင်ကတော့ သူတို့လောက်မဆိုး သူက ဟိုနှစ်ယောက်နှင့်တွဲမိသော်လည်း လူကတော့ ခပ်အေးအေး စကားနဲနဲဆိုတဲ့ အမျိုးအစားထဲကဖြစ်သည်။ ဘယ်သွားသွား အမြဲတစ်တွဲတွဲဖြစ်ကာ ဟိုနှစ်ယောက်၏ အနွံအတာကို အမြဲခံရသူဖြစ်လေသည်။ သူ့မိန်းမကတော့ မှာလိုက်သေးသည် သိပ်မကဲခဲ့ဖို့ ညသိပ်မနက်ဖို့၊ ဒီနေ့က သောကြာနေ့ဆိုတော့ နောက်နေ့ရုံးသွားစရာ မလိုတာကြောင့်လဲ မီးကုန်ယမ်းကုန်ကဲကြမှာ စိုးရိမ်ပုံလဲရပါသည်။ သူ့မိန်းမကလဲ သူတို့နှင့် တစ်ကျောင်းထဲဆင်းဖြစ်သဖြင့် ဒီမောင်တွေ အကြောင်းကို အတွင်းသိဖြစ်သည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမောင်တွေ ကောင်းမှုကြောင့်လဲ ကိုရင်မောင်တစ်ယောက် ဒီမိန်းမနှင့် နီးစပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုရင်မောင် ခပ်အေးအေးသမားတစ်ယောက် ရည်းစားရပါမည့်အရေး ဒီမောင်တွေ ဘေးတီးခဲ့ကြတာဆိုလျှင်လဲ မမှားပေ။
Tags : အိမ်ထောင်ရေး